A'Lelia Walker က - ထို Harlem Renaissance ၏ရွှင်လန်းမှုနတ်ဘုရားမ
A'Lelia Walker က
အဆိုပါ Harlem Renaissance ၏ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းနတ်ဘုရားမ
A'Lelia Walker ကလျင်မြန်စွာအချက်အလက်
လူသိများ: ၏နာယက Harlem Renaissance အနုပညာရှင်တွေ; သတို့သမီး Madam CJ Walker က
အလုပ်အကိုင်: စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလုပ်အမှုဆောင်, အနုပညာနာယက
ရက်စွဲများ: ဇွန်လ 6, 1885 - သြဂုတ်လ 16, 1931
Lelia Walker က, Lelia ရော်ဘင်ဆင်, Lelia McWilliams: ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ
A'Lelia နှစ်နှစ်အဟောင်းတုန်းက A'Lelia Walker က (မစ္စစ္စပီအတွက် Lelia McWilliams ဖွား) စိန့်လူးဝစ်မှသူမ၏မိခင်, Madam CJ Walker ကနှင့်အတူပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ သူမ၏မိခင်စာမတတ်သူခဲ့သော်လည်း A'Lelia ကောင်းစွာပညာတတ်ရှိ၏ သူမ၏မိခင် A'Lelia Tennessee ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့နို့ကောလိပ်မှာကောလိပ်သို့တက်ရောက်ကြောင်းကြောင့်မှငါသိမြင်၏။
သူမ၏မိခင်ရဲ့အလှအပနှင့်ဆံပင်စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းကိုကြီးပြင်းအဖြစ်, A'Lelia စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်သူမ၏မိခင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ A'Lelia ရှိကြောင်း Pittsburgh ထွက်အလုပ်လုပ်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏မေးလ်အလို့ငှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတာဝန်ခံယူခဲ့ပါတယ်။
1908 ခုနှစ်, အမေနဲ့သမီးဆံပင်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ Walker ကနည်းလမ်းအတွက်အမြိုးသမီးမြားကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့ရှိကြောင်း Pittsburgh တစ်ဦးအလှတရားကျောင်းကိုဖွင့်လှစ်။ အဆိုပါစစ်ဆင်ရေး Lelia ကောလိပ်လို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ Madam Walker က 1900. အတွက် Indianapolis မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဌာနချုပ်ပြောင်းရွှေ့ A'Lelia Walker က 1913 ခုနှစ်တွင်တစ်စက္ကန့် Lelia ကောလိပ်နယူးယောက်၌ဤတစျခုဖွင့်ထား၏။
Madam Walker ရဲ့သေသောနောက်, A'Lelia Walker ကသူမသည်သူမ၏မိခင်ရဲ့သေမင်း၏အချိန်နှင့်ပတ်သက်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုအမည်ပြောင်းအဖွဲ့ကို 1919 ခုနှစ်တွင်သမ္မတဖြစ်လာ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့ပွေးလေ၏။ သူမသည် 1928 ခုနှစ် Indianapolis အတွက်ကြီးမားသော Walker ကအဆောက်အဦးကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ Harlem Renaissance စဉ်အတွင်း A'Lelia Walker ကအတူတူအနုပညာရှင်များ, စာရေးဆရာများနှင့်ပညာတတ်ဆောင်ခဲ့သောများစွာသောပါတီများကျင်းပခဲ့သည်။ သူမသည်မူလကသူမ၏မိခင်ကပိုင်ဆိုင်သူမ၏နယူးယောက်မြို့တွင်းစုပေါင်းအဆိုပါအမှောင်မျှော်စင်ကိုခေါ်တိုက်ခန်း, နှင့်သူမ၏တိုင်းပြည် villa မှာ Lewaro အတွက်ပါတီများကျင်းပခဲ့တယ်။
Langston Hughes A'Lelia Walker ကသူမ၏ပါတီများနှင့်ပြည်ခိုင်ဖြိုးများအတွက် Harlem Renaissance ၏ "ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နတ်ဘုရားမ" ဟုခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါပါတီများမဟာစီးပွားပျက်ကပ်၏အစနှင့်အတူအဆုံးသတ်နှင့် A'Lelia Walker က 1930 အတွက်အမှောင်မျှော်စင်ရောင်းချခဲ့သည်။
A'Lelia Walker ကအကြောင်းပိုမို
ခြောက်ပေရှည် A'Lelia Walker ကသုံးကြိမ်လက်ထပ်နှင့်တစ်ဦးမွေးစားသမီးမဲရှိခဲ့ပါတယ်ခဲ့သည်။
A'Lelia Walker ကသူမ၏အသုဘမှာ eulogy Sr; ကားမာရိ McLeod Bethune လည်းအသုဘမှာပြောသော, အဗျာအာဒံကို Clayton ဝဲလ်အားဖြင့်ကယ်လွှတ်ခဲ့သည် 1931 ခုနှစ်တွင်အနိစ္စရောက်လေ၏။ Langston Hughes "A'Lelia ရန်။ " အခါသမယများအတွက်ကဗျာတစ်ပုဒ်ရေးသားခဲ့သည်
မိခင်: စာရာ Breedlove Walker က - Madam CJ Walker က
ခမညျးတျော: တဖန်မောရှေအား McWilliams
ခင်ပွန်း: ယောရော်ဘင်ဆင် (1914 ခုနှစျကွာရှင်း)
ခင်ပွန်း: Wiley Wilson က (သူမ၏မိခင်ကွယ်လွန်သွား3ရက်အကြာမှာလက်ထပ်; 1919 ကွာရှင်း)
ခင်ပွန်း: ဂျိမ်းစ်အာသာကနေဒီ (1931 ကွာရှင်းစောစော 1920 လက်ထပ်)
သမီး: မဲ, 1912 မွေးစား
Nancy Pelosi: အတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့် Quotes
မဂ္ဂီ Kuhn Quotes
ငါဘယ်လိုစကိတ်နေစဉ် Safely Fall သလား?
တစ်ဦး Diptych ပန်းချီ
သင့်ရဲ့ Chakra ၏လည်အကြောင်းလေ့လာပါ
ဤရွေ့ကားအသက် 30 ROFL စတီဗင် Wright ရဲ့ရယ်စရာအကောင်းဆုံးဟာသ Crazily Funny Are
ဖက်ဒရယ်လေကြောင်းညွှန်ကြားမှု (FAA) အကြောင်း
(ထိုမွေးဖွားခြင်းဇယားတွင်) Aries အတွက် Saturn
, Dribble ရိုက်များနှင့်နှစ်ဦးစလုံးလက်စွဲနှင့်အတူဖြတ်သွားဖို့သင်ယူပါဖို့ကိုဘယ်လို
ဖော့စဖော့ရက် Periodic ဇယားတွင်အဘယ်မှာတွေ့ပါသလား
အလယ်ခေတ် Times သတင်းစာအတွက်ကျွန်ပြုမှုနှင့်ကြိုး
ဥယျာဉ်နှင့်ဥယျာဉ်အကြောင်း 11 အကောင်းဆုံးကလေးများ၏ရုပ်ပုံစာအုပ်များ
တစ်စားသုံးသူ Society မှာ Ethical နေထိုင်မှု၏စိန်ခေါ်မှုများ
Notre Dame GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
12+ Paint Apps နှင့်အရောင် Tools များ
ပြင်သစ်အကြံပေးချက်: အမြဲတမ်း '' Si vous Voulez ။ ' ဘယ်တော့မှမ '' Si vous Voudriez "
အဆိုပါကင်ဆာ - Capricorn Polarized